मे | 2021 | manka kura
बिभिन्न ठाउँका नाम’bout
विभिन्न ठाउंका नाम कसरी रहे होलान् हामीले कहिल्यै सोच्ने, सोध्ने, वुझ्ने गरेका छौं त ? । मलाई लाग्यो पुराना नाम बिर्सिदैं वा नयाँ नामले छोप्दै जाने हो भने इतिहास मेटिन्छ । तत्कालिन समयमा कुनै पनि ठाउँका नाउँ त्यसै रहेका थिएनन्, रहेनन् होला । यसका पछाडि इतिहास संस्कृति किंवदन्ति पक्कै जोडिएको हुनुपर्छ । डा. तीर्थ बहादुर श्रेष्ठका भनाई अनुसार ‘ कुनै पनि ठाउँको नाउँ विना कारण सिर्जना हुँदैन । त्यहाँ इतिहास लुकेको हुन्छ ,धर्म संस्कृति र अनुश्रुतिका लहराले मानव कल्पनालाई टाढा टाढा सम्म पु¥याइदिएको हुन्छ । भौगोलिक विशेषता र प्राकृतिक विशेषतालाई छर्लङ्ग्याई दिएको हुन्छ ।’
२०७८ जेठ १ बाट मैले आफनो फेसबुक (मुहार पुस्तिका )मा हरेक शनिवार र मंगलवार विभिन्न ठाउँका नाम कसरी सृजना भए वा रहे भन्ने’boutमा पुस्तक पत्रिका पढ्दा वा कतिपय ठाउँमा पुग्दा वुढापाकाहरुबाट सुनेर सो ’bout जानेका कुराहरु राख्दै अाएकाे छु । उता ८।१० वटा प्रकाशित भएपछि तपाईँहरु समक्ष राख्दै जाने प्रयत्न गर्नेछु । यसले ब्लग मित्रहरुस‌ग पुन जाेडिन मलाइ सहयाेग मिल्ने छ ।
मैले हाल लगभग साठी भन्दा वढी स्थानका नाम कसरी रहे भन्ने टिपोट गरेको छु,अरु खोज्दै पनि जाने नै छु । अहिलेका नयाँ पुस्ता र पुरानाकुरा जान्न चाहने इच्छुकहरुलाई जानकारी गराउने मेरो मनसुवा हो । तपाईँहरुले पनि यस्ता टिपोट गर्नु भए्कै होला । थाहा भएका कुरा जानकारी गराउनु भए अझ आभारीनै हुने छु ।
उति वेला काठमाडौं सहर नेवारहरुकै बस्ती भएकोले सम्पूर्ण चोक वहाल, टोलका नामहरु नेपाल भाषाबाटै रहेको कुरामा सन्देह छैन । पहाडतिर पुग्दा मगर र अन्य बिभिन्न जातिका भाषाबाट ठाउँका नामहरु रहेका पाइन्छन् । नेपाल भाषा सम्वन्धी मेरो ज्ञान अल्पनै रहेको यहाँहरुमा जानकारी पनि गराउँदछु । यस’bout बिज्ञ तपाईँहरु नै हुनुहुन्छ, जाने बुझेका कुराहरु यही मुहार पुस्तिकामा राख्न सक्नु हुनेछ वा मेरो इमेल मा पठाई सहयोग सुझाव दिन सक्नु हुनेछ । तपाइहरुको लाइक, कमेन्ट, सेयर तथा सुझावको अपेक्षा गरेको छु ।
अन्तमा कोरोनालाई ख्याल ख्याल नठानौं । हामीले धेरै होनाहार नेपालीहरु गुमाई सकेका छौं । लक्षण देखिने वित्तिक्कै डाक्टरी सल्लाह लिऊँं । यो महामारीमा सकेसम्म घरमै वसौं । आफु सुरक्षित रहौँ, अरुलाई पनि सुरक्षित राखौँ । धन्यवाद ।
1. सोह्रखुटृे पाटी
लैनचौरबाट बालाजुतर्फ जांदा पर्ने स्थान आजको सोह्रखुटृेमा बि.सं. १८६४ मा काठका सोह्र खुट्टा ( थाम ) भएको पाटी बनेपछि नै त्यस ठाउँको नाम सोह्रखुटृेबाट चिनिन थाल्यो । झिंगटीको छानो भएको एकतले पाटी उतिवेला जंगलमै थियो । पहिले पश्चिमभेगबाट हिंडेर काठमाडौं आउने, जाने बटुवा वा भरियाहरु यो पाटीमा थकाईमार्न सुस्ताउंथे । पाटी नजिकै कमलको पोखरी पनि भएकोले यो बडो आरामदायी थियो रे अझ जक्खु – (माटाको घ्याम्पोमा चिसो पानी राखेको ) ठाउँ भएकोले सोह्रखुटृे पाटी बटुवा भरियाका लागि उतिवेला निकै चर्चित स्थन थियो । सोह्रखुटृे पाटीका ’boutमा सरदार भीमबहादुर पाँडेले लेख्नु भएको छ “ सोह्रखुटृे पाटी नगिचै कपरदार भोटु पाँडेले बनाएको निकै ठूलो कमलको पोखरी, धारा, देवल, जक्खू, पौवा र दायाँ बायाँ ठूलो सल्लाघारी थियो । पोखरीमा लटरम्म कमल फुलेको देखिन्थ्यो । सोह्रखुटृे पाटी पश्चिमाहरुका निमित्त एक प्रकारले काठमाडौं सहरको रमझमको पूर्व परिचय सोह्रखुटृे पाटीले नै दिन्थ्यो । ” माल पाउनेले चाल पाएपो भने झैं पछि सडक विभागले सडक विस्तार गर्ने क्रममा २०७१ सालमा सो ऐतिहासिक पाटी भत्काइदियो । अहिले स्थानीय सरकारले यसलाई पुरानै आकारमा बनाउने निर्णय गरेको सुािएको छ ।
2. भक्तपुर (ख्वप)
लिच्छविकालमा भक्तपुरलाई ‘खोपृदङग’( ग्रामबाट विकास भएर दं्रङग) भनिन्थ्यो । पछि यस वस्तीको नाम खोपृङ रह्यो । खोपृङ शव्द संस्कृत नभएर किरांत भाषाको शव्द हो भनिन्छ । खोपृङबाट अपभ्रंश भएर अहिले नेवारी भाषामा ‘ख्वपः ’ ( भक्तपुर) भनेर चिनिन्छ ।
‘पछि उपत्यकाको यसै स्थानमा सबभन्दा पहिले सूर्यको उज्यालो पर्ने भएको हुनाले यसको संस्कृतमा भक्तग्राम, भक्तपुर , भादगाऊँ राखियो’ सूर्यविक्रम ज्ञवाली )
अहिले भक्तपुर (ख्वप ) सहर प्राचिन विशेषताहरु जीवन्त राख्ने सहरका रुपमा देखिएको छ । वि.सं १७५९ तिर नेपाली प्यागोडा शैलीमा बनेको उपत्यकाको सवैभन्दा अग्लो न्यातपोल ( पाँचतले दरवार ) पनि यहीं छ । भक्तपुर दरवार विश्व सम्पदा सूचीमा समेत परेको छ ।
3. खिचापोखरी (खेचायके )
नेपालभाषामा खिचा भनेको कुकुर र पुखु भनेको पोखरी हो । तर खिचापोखरी भने कुकुर पोखरी भने हैन । युगपुरुष सत्यमोहन जोशीको भनाइमा बिहानीको भोरमा देवदेवीलाई संगीतमय धुनले जागाा गराउनुलाई नेपाल भाषामा ‘खेचायके ’भनिन्छ । यो ठाउँ त्यतिवेला त्यही कार्य गर्ने स्थल भएकोले ‘खेचायके पुखु’ भन्दा भन्दै खिचापुखु र खिचापुखुबाट अहिले सो ठाउँको नाउँ खिचापोखरी रहेको हो ।
केहीको भनाइमा चांहि अहिलेको खिचापोखरीमा पहिले ठूलो पोखरी नै थियो । पोखरीमा सबैले मुख धुन्थे । नेपाल भाषामा अनुहारलाई ‘खे ’र धुनेलाई ‘चा ’ पोखरीलाई पुखु अर्थात ‘खेचापुखु’ (मुखधुने पोखरी ) भन्दा भन्दै खेचापुखुबाट खिचापोखरी रहेको भन्नेहरु पनि छन् । यस्ले के कुरा देखाउँछ भने अहिलेको खिचापोखरीमा पहिले देवदेवीलाई संगितमय धुनले जागा गराउने ठाउँ वा पोखरी रहेकोले सहरवासीको मुख धुने ठाउँ पनि रहेछ भन्ने बुझाउँछ ।
4. पनौती –(पँल्होंटी )
नेवारी शव्दहरु पँ, ल्हों र टी बाट अपभ्रंश भई पनौती बनेको हो । ‘पँ’ को अर्थ बाँस , ‘ल्हों’ को अर्थ ढुङगा, र ‘टी’ को अर्थ टुसा हो । ढुङगामा बाँस टुसाएकाले पनौतीको नाम नेपाल भाषामा पँल्होंटी रहन गएको जनश्रुति छ । यही पँल्होंटी शब्दबाट अपभ्रंश हुँदै पछि पनौती बनेको हो ।
पँल्होंटी अर्थात ढुङगामा बाँस टुसाएको ’bout रोचक किंवदन्ती भने यस्तो छ । गौतम ऋषिले एकदिन आफनी श्रीमती अहिल्यासँग आफनै स्वरुप अर्थात आफु जस्तै बनेर स्वर्गका देवता इन्द्र एउटै ओच्छ्यानमा बसिरहेको भेटेपछि गौतम ऋषि आगो भएछन् । उनले रिस थाम्नै नसकि तुरुन्तै देवता इन्द्रलाई तिम्रा शरीरभरि योनी होस् अनि आफनी श्रीमती अहिल्यालाई चांहि पत्थर भएस् भनेर श्राप दिएछन् । इन्द्रलाई प¥यो फसाद, उनी तुरुन्तै श्रापबाट मुक्त हुन ब्रह्माका शरणमा पुगेर विन्ति गरेछन् । व्रह्माले श्रापवाट मुक्त हुने यस्तो उपाय सिकाइ दिएछन् । बाँसको लौरो टेक्दै जानु जुन ढुङगामा टेक्दा बाँसमा टुसा आउँछ त्यही ढुङगामा शिवलिङग स्थापना गरेर १२ वर्ष तपस्या गर्नु त्यसपछि शिवले तिम्रो श्राप मुक्त गर्नेछन् । इन्द्रले बाँसको लौरौ टक्दै संसार घमि सके लौरोमा टुसो आउँदैन । जव पनौती आइपुगेर थकाइमार्न एउटा ढुङगामा बाँस के टेकेका थिए बाँसको लठ्ठीमा टुसा आएछ । ढुङगामाथि बाँस टुसाएकोले पँल्होंटीबाट पनौतीे नाम रहन गएको जनश्रुति रहेको छ ।
5. असन ( अन सं )
यो धेरै पहिलाको कुरा हो । एकदिन अहिलेको असनमा हावा हुण्डरी वताससंगै दर्केर पानी परिरहेको बेला एउटा असला माछा पनि खसेछ । टोलभरी हल्ला फैलियो माछा खस्यो भनेर । सबै अचम्म मानेर माछा हेर्नका लागि भिडभाड नै लागे छ । हेर्न आउने सबै काँ खसेछ काँ ? खोइ माछा ? भनेर सोध्न थालेछन् । देख्नेहरुले चांहि अन सं, अन सं अर्थात उ त्यहीँ, उ त्यहीँ भन्दै( हातले देखाउँदै ) ‘ भनेछन् । नेपाल भाषामा अन सं भनेको उ त्यहीँ हो । पछि पछि पनि मानिसहरुले आकाशवाट असला माछा खसेको ठाउँ उ त्यहीँ हो अर्थात अनः सं भन्दा भन्दै अन सं बाट ‘असन ’नाम रहन गएको जनश्रुति छ । त्यो किंवदन्तीलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण भने अझै असनमा छंदैछ । तपाइले ख्याल गर्नु भएको छ कि छैन ? छैन भने असन पुग्दा हेर्नु भए हुन्छ ।
त्यसदिन खसेको असला माछाको प्रतिरुप ‘न्या ल्वं ’ अर्थात ढुंगे माछा असनमा छंदैछ । २०६६ सालसम्म ‘न्या ल्वं ’ढुंगेमाछा जमिनको सतहमै अर्थात जमिनबाट एक वित्ता माथि फ्रेम वनाएर राखिएको थियो । पछि बाटो बनाउने क्रममा त्यो पुरिएर होला अहिले चाँहि पहिला माछा खसेको ठाउँ नजिकै दुई अढाई फिट अग्लो ठाउँं बनाइ माछाको अर्को नयाँ प्रतिमूर्ति वनाएर राखिएको छ । यसरी परापूर्वकाल देखि असन वजारको रुपमा कहलिएको असनको नाम अन संः बाट आजसम्म असन बजारका रुपमा प्रचलित रहेको छ । यससँगै जोडिएको तान्त्रि गुभाजुका कथा पनि छ त्यसमा पछि जाउँला है ।
6. बाग्लुङ – (व्यघ्रलु )
नेपालको नक्साभित्र रहेको नेपाल जस्तै आकारको बाग्लुङ जिल्लाको नाम बाग्लुङ कसरी रहेछ त, जनश्रुति भने यस्तो छ । मगर भाषामा बाग्लुङलाई पहिले ‘व्यघ्रलु ’ भनिन्थ्यो । व्यघ्र भनेको बाघ र लु भनेको खेद्नु हो । बाघ खेदेर बसालेको बस्ती भएकोले ‘व्यघ्रलु ’ भनिएको हो । कसैले भने व्यघ्रलुङ पनि भन्छन् । अर्थात व्यघ्र भनेको बाघ र लुङ भनेको लस्कर । बाघको लस्कर लाग्ने ठाउँ । व्यघ्रलु ,व्यघ्रलुङ भन्दा भन्दै मानिसको जिव्रो बटारिएर अपभ्रंश हुँदै आज बाग्लुङ जन जिव्रोमा झुन्डिएको छ । । जे होस् उतिवेला प्रसस्त बाघ हुने ठाउँ रहेछ बाग्लुङ । बाघलालाई खेदेर बस्ती वसालेका हुनले बाग्लुङ नाम रहन गएको कुरामा दुईमत छैन । बाग्लुङको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल वाग्लुङ कालिका मन्दिर पनि जंगलमै छ । मन्दिरको अग्रभागमा सुन्दर वाघको प्रतिमूर्ति बनाएर राखिएको पाइन्छ ।
पहिले खुवै चर्चित वाग्लुङमा बन्ने निङालाको वुटृेदार तमाखु खाने नली, निङालाको कलम, नेपाली कागज( हात्ती पाते ) पनि निकै प्रसिद्ध थियो ।
7. टोखा ( टुख्यः )
काठमाडौंबाट नजिकै उत्तरमा रहेको आजको टोखा सहरको नाम पहिले टोखा कसरी रहन गयो त ?
नेपाल भाषामा ‘टु ’को अर्थ उखु र ‘ख्यः’ को अर्थ फाल्ने ठाउँ बारी हो । यहाँ पहिले धेरै उखु खेती गरिन्थ्यो । उखु खेती हुने भएकोले यहाँ चाकु पनि बनाइन्थ्यो । त्यसैले टोखाको चाकु उहिले देखिनै प्रशिद्ध छ । अहिले पनि टोखामा चाकु बनाइन्छ । टोखाको चाकु ब्राण्ड नै बनिसकेको छ । पहिले अहिलेको टोखालाई ‘टुख्यः’ भनेर चिनिन्थ्यो । टुख्यः बाट अपभ्रंश हुंदै हालको नाम टोखा रहेको भनिन्छ ।
8. लगनखेल –(ल ख्यः )
लगनखेललाई पहिले नेपाल भाषामा लख्यः अर्थात पानीले भरिएको चौर भनेर चिनिन्थ्यो । नेपाल भाषामा ‘ल’ को अर्थ पानी र ‘ख्यः’ को अर्थ चौर हो । पानीले भरिएको चौर भएकोले ल ख्यः भनिएको हो । कुनै वेला लगनखेलमा सात वटा पोखरी थिए । त्यसमध्येको एउटा सप्तपाताल हो । पृथ्वीको तलतिर रहने ७ लोकमध्ये सबैभन्दा तल्लो लोक सप्तपाताल हो । जसलाई नागलोक पनि भनिन्थ्यो । जात्रामध्ये प्रशिद्ध तथा सबैभन्दा लामो रातो मत्स्येन्द्रनाथ र मीननाथ जात्रा सम्पन्न भएपछि सो को खवर स्वर्गका राजा देवता इन्द्र र पातालका देवता नागराजालाई सूचना गर्न यही सप्तपाताल पोखरी प्रयोग गरिन्छ । स्वर्गमा सन्देश पठाउन एकजोडी भँगेरा आकाशमा उडाइन्छ भने पातालका नागराजालाई सूचना दिन एक जोडी माछा उक्त सप्तपाताल पोखरीमा छाड्ने चलन अध्यावधि छंदैछ । त्यसैले ल ख्यःबाटै लगनखेल रहन गएको भन्ने जनश्रुति छ ।
You are currently browsing the manka kura blog archives for मे, 2021.